The OnePlus 9 waa la sifeeyey: tani waxay noqon doontaa naqshadeynta iyo qayb ka mid ah astaamaha | Androidsis
Waxay u muuqataa in soo saaraha Aasiya uu si adag u shaqeynayo si uu u muujiyo sumcadiisa soo socota. Dhawaan ayaan kaaga sheegnay cusub OnePlus Nord N10 iyo N100. Hadda waa markiisii Oneplus 9.
Waa run in weli ay jiraan bilo yar si loo arko taleefankan cusub, laakiin soo bandhig ayaa la daadiyay halka aan ku arki karno Naqshadda Oneplus 9, marka lagu daro qayb ka mid ah astaamaheeda.
Kani wuxuu noqon doonaa shaashadda OnePlus 9: AMOLED iyo inbadan
Sidaan kuu sheegnay, waxay u badan tahay in OnePlus 9 la soo bandhigi doono bisha Maarso ama Abriil, laakiin shirkadda weyn ee Aasiya ayaa durbaba ka shaqeyneysa naqshadeynta iyo qalabka labadaba. Waxaad dhahdaa macluumaadkan ku saabsan la sifeeyey waa inaad ku qabataa tuugo. Waa run in isha laga sii daayay, bogga mobiilka ee loo yaqaan '91 mobiles portal', ay sharaf weyn ku leedahay qaybta. Laakiin waa xilli hore in la yiraahdo tani waxay noqon doontaa naqshad rasmi ah ee OnePlus 9.
In ka badan wax kasta, maxaa yeelay taleefannadu waxay maraan isbeddello inta lagu jiro nidaamka abuurista, sawirkan xadayna wuxuu noqon karaa moodel oo naqshaddiisa ugu dambeyn la tirtiray. Laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan helno fikrad ah muuqaalka muuqaalka Calanka xiga ee OnePlus. Sidan oo kale, waa in la ogaadaa in shaashadda OnePlus 9 ay noqon doonto mid fidsan, in kasta oo qalooca yar ee geesaha ah, lagu daro kamarad daloola shaashadda si aan loo jebin bilicsanaanta barta.
Horeba dhabarka waxaan ka helnaa module kamarad ah oo lagu raad joogo tan 8T, in kasta oo kiiskan aan ka helno saddex dareemayaal. Ma aragtaa farqiga u dhexeeya cabbirka labada hore iyo kan saddexaad? Waxay u badan tahay inay ku jirto ka mid ahaanshaha dareemayaasha ToF. Inta soo hartay, waxaa la filayaa inuu uqe taleefankan sharad ku galo shaashad dhan 6.55-inji oo ay sameysay a AMOLED guddi awood u leh inay siiso qaraar buuxa HD + iyo cabir cusbooneysiin ah 120 Hz.
Sidee ayey noqon kartaa haddii kale, processor-ka OnePlus 9 wuxuu noqon doonaa jawharadda taajkii Qualcomm, Snapdragon-ka 875 ee cajiibka ah oo ay weheliso qaabeynta u dhexeysa 6 iyo 12 GB oo RAM ah. Cilladda keega ayaa noqon doonta baytarigeeda, kaas oo aynaan garanayn awoodda, laakiin waxay yeelan doontaa a 65W lacag deg deg ah, marka lagu daro adeegsiga nidaamka OxygenOS 11 ee ku shaqeeya Android 11 oo saldhig u ah soo saarista aaladdaan nolosha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » The OnePlus 9 ayaa daadanaya: tani waxay noqon doontaa naqshadeeda iyo qeyb ka mid ah astaamaha
Sida loo baabi'iyo goobta ay ku yaalliin sawirrada aan ku qaadno taleefanka casriga ah
Google Stadia wuxuu ku darayaa ogeysiisyada ciyaaraha cusub, wararka iyo talooyinka